Nchịkọta Ahịa Ahịa nke 2015 | Martech Zone
Ndekọ Nkwupụta Ahịa Mobile maka 2015
Wenezde, August 19, 2015 Wenezde, August 19, 2015 Douglas Karr
Ọ bụghị ihe ijuanya na anyị na-ekere òkè na nke a infographic n'ụbọchị anyị gara n'isi ụlọ ọrụ nke Bluebridge, ihe ikpo okwu ngwa dijitalụ dijitalụ. Anyị nwere ngwa mkpanaka siri ike, mana ụlọ ọrụ ahụ wepụrụ na mkpanaka, ma ugbu a, anyị ejiri ngwa mkpanaka mebiri emebi.
Anyị maara na anyị anaghị efunahụ ụfọdụ site na ịmanye ọdịnaya anyị n'elu ikpo okwu. Anyị na-atụ anya ịnweta ụdị ọhụụ, ma Bluebridge nwere ụlọ ọrụ mara ezigbo mma. Ha na-arụ ọrụ dị egwu ma na-eto ngwa ngwa.
Ọganihu ngwa ngwa nke smartphone na mbadamba mbadamba emetụtala ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ ọ bụla nke ahịa dijitalụ. Mmetụta a sitere na mgbanwe nke 'Mobile-friendly' algorithm kachasị ọhụrụ na nsonaazụ ọchụchọ Google site na nsonaazụ ntụgharị dị ala na ama, ojiji nke mgbasa ozi mmekọrịta na mkpanaka ma hụ na ozi ịntanetị anyị na-emegharị mmekọrịta. Dave Chaffey
Isi ihe si na steeti Mobile Marketing 2015
Ejiri oge 86% ngwa mkpanaaka na websaịtị mkpanaka. Y’oburu n’acho itinye aka na mkpanaka, oge erugo itinye ego n’ime ngwa mkpanaaka!
90% nke ndị na-azụ ahịa ekwentị na-eji ekwentị ha eme ihe tupu ịzụta ihe na 84% nke ndị na-azụ ahịa na-eji ngwaọrụ ha enyere aka igosi mgbe ha nọ n'ụlọ ahịa.
25% nke mkpokọta ọchụchọ gbara ajụjụ dị ugbu a na ekwentị mkpanaaka.
Na 2016, mobile ad na-emefu gafere mmefu na desktọọpụ, na-eru ihe ruru ijeri $ 70 n'ụwa niile.
Ekwentị mkpanaka mepere emepe emeela 180% n'ime afọ atọ, na 48% nke ozi ịntanetị niile mepere na ekwentị.
Tags: 2015mobile ad na-emefumobile ngwamobile ngwa ọdịnalaemail mkpanaka emeghe ọnụegoinfographic ahịa infographicọnụ ọgụgụ ahịa ahịa mkpanakastats ahia ahiamkpanaka ọchụchọ
Nkpughe 4 Can Pụrụ Ikpughe ya na Data Salesforce
RelateIQ: A Relationship Intelligence Kwadoro CRM